मलाई मर्नु न बाच्नु बनाए ! भाग्य र सिशिरले गर्दा मेरो बच्चा खोसियो भन्दै अक्रोशित…(भिडियो) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
मलाई मर्नु न बाच्नु बनाए ! भाग्य र सिशिरले गर्दा मेरो बच्चा खोसियो भन्दै अक्रोशित…(भिडियो)
Published :7August, 2020 4:05 pm
कपनमा एउटा बेवारिसे बालिका फेला परेको भन्दै सबै भन्दा पहिला युट्युवर भाग्य न्यौपानेलाई बोलाईएको थियो । उनी सो ठाउमा गएर रिपोर्टिङ गरे । भाग्य कै सहयोगमा देश विदेशवाट सहयोग रकमको ओइरो लागेको थियो । वेवारिसे अवस्थामा बच्चा फेला परेपछि प्रहरी बोलाउनु पर्ने भएपनि युट्युवरलाई बोलाइएको थियो । प्रहरीलाई खबर नगरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएपछि प्रहरीले त्यसका बारेमा अनुसन्धान थालेपछि रहस्य खुलेको हो ।
परिवारलाई खवर नगरी काठमाडौंमै कुनै संस्थामा आश्रय लिई बसेकै समयमा शिशु जन्मेपछी सहयोगीमार्फत् उनको केयर बालगृहका संस्थापकसँग भेट हुन्छ । र उनैको मिलमतोमा साउन १२ गते नाटक मञ्चन गरी ति शिशुलाई कार्टुनमा राखेको खुलासा भएको छ । सत्य तथ्य बाहिर आएपछि धेरै नेपालीले पुष्पा अधिकारीलाई बिरोध गरिरहेको छ ।
यस्तैमा आज उक्त संथामा पुष्पा श्रीजना लगाएतले पुष्पले गरेको बाटो गलत भएतापनी उनी गलत नभएको दाबी गरेका छन् । यस्तैमा उनिहरुले शिशिर भण्डारी र भाग्य न्यौप्यानेलअैइ बच्चा खोसिएकोमा आरोप पनि लगाएका छन् । पुष्पा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि गएकी छिन् । बाँकी कुरा हेरौ भिडियोमा